Iskuduwaha qorraxda 'Strawberry Cinnamon Rolls' oo ay kujirto kareem farmaajo ah - Show Sugk Geek Show - Roodhi Khamiir
Iskuduwaha qorraxda 'Strawberry Cinnamon Rolls' oo ay kujirto Qaboojiye Farmaaji
Isugeynta qorfe Strawberry waxay ku duubtaa qaboojiyaha farmaajada
Duubka qorfaha 'Strawberry' dhab ahaantii ma laha wax qorfe ah iyaga oo dhan. Halkii laga heli lahaa sonkorta qorfe, duubku waxaa ka buuxsama qaro weyn dhimista strawberry iyo strawberries cusub. Is duub iyaga, jar oo u oggolow inay habeenki kici doonaan. U dubi iyaga subaxdii cusub oo ku dhalaali liinta kareemka kareemka kareemka adoo weli diirinaya duubista qorfaha qorraxda ugu cajiibka badan abid!
Sida loo sameeyo dhimista miraha loo yaqaan 'strawberry dhimista' duubka dufanka qorfe
Duubka qorfaha 'Strawberry' wuxuu ku bilaabmaa yareynta strawberry. Waxaan ku darayaa xoogaa xoogaa sonkor ah cuntadan maxaa yeelay qorfe duuduubku ma ahan kuwo aad u macaan marka waxaad u baahan tahay sonkortaas lagu daray.
Ilaa ay miraha ku jiraan xilliyo, waxaan isticmaali doonaa strawberries qaboojiyey oo had iyo jeer xilligooda ku jira.
Isku dar sonkortaada iyo strawberries (barafoobay ama la dhalaaliyay, macno malahan) digsi dhexdhexaad ah oo isku kari ilaa. Marmar walaaq si aad uga hortagto gubashada.
Marka strawberries la dhalaaliyo waxaad isticmaali kartaa isku-darka miraha si aad u jajabiso berryga xoogaa laakiin iyagu kaligood ayaa u burburi doona sida isku darku u karinayo.
U oggolow yareynta miraha loo yaqaan 'strawberry dhimista' 5-10 daqiiqo ka dibna ku dar midkaaga ClearJel slurry (ama waxaad isticmaali kartaa budada galleyda). Dhig dhimista strawberry-ka qaboojiyaha si aad u qaboojiso habeenkii.
Sida loo sameeyo cajiinka qorfe duufaanka cajiinka
Samee cajiinkaaga macaan adoo isku daraya caanaha diirran (110ºF), hal qaado oo sonkor ah iyo khamiir koob lagu cabbirayo ama weel haloo fariisto illaa ay xumbo ka socoto.
Isku dar khamiirka qamadiga leh burka ku jira weelka mashiinkaaga istaagga leh lifaaqa cajiinka iskuna qas ilaa inta la isku darayo. Ka dib ku dar inta ka hartay maaddooyinkaaga.
Waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa gacanta sidoo kale, waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho dufan xusulka ah.
U ogolow cajiinka inuu isku qaso mid hooseeya daqiiqado yar ka dibna xawaaraha isku kari ilaa dhexdhexaad. Waxaad dooneysaa inaad u ogolaato cajiinka inuu isku qasmo ilaa ay dhamaan ka bilaabaan inay ku dheganaadaan jumlada cajiinka oo ay dib u soo kabato markaad farta ku cadaato.
Isku dar bur iyo khamiir isku dar oo isku dar, Ka dibna ku dar sonkorta, ukunta, milix iyo subag
Haddii cajiinka uu aad u qoyan yahay oo uusan ku dheganeyn qafiska cajiinka waxaad ku dari kartaa 1/4 koob oo bur ah si aad uga dhigto mid adag. Haddii cajiinka uu aad u qalalan yahay, ku dar 1 qaado oo biyo ah.
Waxaad sidoo kale tijaabin kartaa cajiinka adoo samaynaya tijaabada daaqada. Qaado xoogaa yar oo cajiinka ah kuna kala bixi faraha dhexdooda. Haddii aad ka dhigi kartid cajiinka mid aad u dhuuban illaa aad ka arki kartid dhexdiisa, gluten kugu filan ayaa soo baxay oo cajiinkuna waa diyaar.
Ku rid cajiinka baaquli subag leh, ku dabool shukumaan si aad u qoyso oo dhig meel diiran oo kor u kici kara 90 daqiiqo. Waxaan u shidaa foornadeyda 170ºF, albaabka waan furey oo waxaan baaquli saaraa albaabka foornada maxaa yeelay jikadaydu badanaa waa qabow. Cajaladdu waxay jeceshahay inay kacdo illaa 90ºF.
Sida loo soo ururiyo duubka qorfe qorfe
Isku duub cajiinkaaga leydi. Waxaad rabtaa dhumucda cajiinka inay ahaato qiyaastii 1/4 ″. Ku faafi lakab khafiif ah oo ah dhimista strawberry-ka dhammaan dusha cajiinka, iska ilaali dhabarka 1/2 ″ si aad u xirto duubka.
Ku saydh qaar ka mid ah miraha strawberries cusub ee la jarjarey dusha sare ee dhimista (ikhtiyaar).
dubista keeg vanilj oo xoqan
Kadib cajiinkaaga u duub si qumman oo adag. Waxaan qirayaa in qaar ka mid ah buuxintayda 'strawberry' ay xoogaa soo baxday oo waxay ahayd nooc ka mid ah hawshii qasnayd. Kaliya waxaan ku halaabay hadhaagii hadhaagii. Wax yar oo hadhay ayaa ii hadhay oo aan ku buuxin jiray meelaha qaar kadib duuduubyada la dubo.
Iska wareeji muquuninta 8-10 duubab isku mid ah. Ku diyaari kuwaan xaashi weyn oo wax lagu dubo oo ay ku daboolan yihiin warqad soo dejisan. Ku duub duub duubka balaastigga ah, hubi in geesaha si adag loogu jiidayo birta si looga hortago in hawadu soo gasho.
Digsiga duub dhig dhig qaboojiyaha habeenkii.
Ka soo qaad duub qaboojiyaha ilaa laba saacadood ka hor intaadan dubin oo u oggolow inay diirimaad yeeshaan oo ay labanlaab noqdaan.
Ku duub duubyada waxoogaa ukunta dhaq ah ka dibna duub duub foornada 350 atF illaa 30 daqiiqo ama illaa heerkulka gudaha ka akhriyo 180º-200ºF.
Sida loo sameeyo qaboojiyaha farmaajada qaboojiyaha ee duubka qorfaha
Sameynta qaboojiyaha farmaajada waa mid aad u fudud. Kaliya kareemka kareemkaaga kareemka ah illaa uu kafiicnaanayo oo siman yahay si aadan u helin wax buro ah. Waxaan ka helay fiicni gacmeed sida ugu fiican u shaqeeya. Kadib ku dar subaggaaga jilicsan iyo sonkorta budada ah ee la miiray.
Ka dib ku dar kareemkaaga culus, milix iyo liin soosaarka. Waad ku dari kartaa kareemo badan ama ka yar iyadoo kuxiran sida qaro weyn ama dhuuban aad u rabto barafkaaga. Waxaan jeclahay midkeyga khafiifka ah
Ku daadi barafka dusha sare ee duubkaaga diiran bac balaastik ah ama qaaddo oo u adeeg!
Kuwani qorfaha 'strawberry' waxay ku duuduubaan qaboojiyaha farmaajada ayaa sameeya kan ugu xiisaha badan dhammaadka usbuuca. Duubabku waa weyn yihiin, sida cabbirka gacantayda. Haddii aad rabto duubab yaryar ka dib waxaad u goyn kartaa wareeggaaga 12 xaleef halkii laga dhigi lahaa 8.
Waxaan u sameeyay duuduubyada qorfe 'strawberry' oo qayb ka ah tayda wiilka sawir afar bilood ah taas oo aad ka arki karto halkan.
Qorfeha jilicsan ee jilicsan ee jilicsan ayaa ka soo baxa foornada oo ku dhalaalay qaboojiyaha farmaajo kareemka. Burburkii ugu fiicnaa! Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:25 daqiiqado Caddaynta:laba saacado 30 daqiiqado Kalori:655kcal
Qorfe Roll cajiinka
▢4 ounces (114 g) caano 110ºF
▢5 garaam qalalan khamiir deg deg ah
▢14 ounces (397 g) bur dhan ujeedo leh ama bur bur ah
▢4 ounces (114 g) subag jilcisay
▢laba ounces (57 g) sonkorta
▢laba weyn ukunta heerkulka qolka
▢16 ounces (114 g) strawberries cusub ama barafoobay
▢6 ounces (114 g) sonkorta granulated
▢laba qaaddo liin dhanaan
▢4 Miisaska cuntada lagu kariyo ClearJel ama 2 qaado oo sabuul galley ah
▢laba ounces (57 g) biyo
▢1 koob strawberries cusub la jarjarey
▢4 ounces (114 g) farmaajo jilcisay
▢4 ounces (114 g) subag aan cusbo lahayn jilcisay
▢3 ounces (85 g) sonkorta budada ah
▢laba ounces (57 g) kareemka karbaashka culus ama ka yar haddii aad jeceshahay isku dheelitirnaan adag
▢1 qaaddo shaaha soosaarida vanilj
▢Istaag mashiinka cajiinka leh cajiinka
▢Hal digsi (13'x18 ') ama digsi xajmi ahaan la mid ah
Caanaha diirran illaa 110ºF. Ku dar 1 qaado oo sonkor ah ka dibna khamiirka iyo foornada isku dar. U dhig 5 daqiiqo ama ilaa xumbo.
Dhig bur ah baaquli isku qasan khamiirka / caanaha isku walaaq ilaa isku dar
Ukuntaada ku dar midba mar, adigoo u oggolaanaya mid kasta inuu isku daro ka hor intaadan ku darin tan xigta
Ku dar sonkorta, subagga iyo milixda oo isku walaaq hoose illaa inta la isku darayo
Hoos ha isugu qasmo 5-10 daqiiqadood illaa cajiinka uu ka baxayo dhinacyada baaquli oo dib ayuu u soo kabanayaa markaad taabato. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa tijaabada daaqada (fiiri boostada blog tusaale ahaan)
U qaabee cajiinka kubad jilicsan ka dibna ku rid baaquli dufan leh. Ku dabool tuwaal shaah ah oo ha u kiciyo 90 daqiiqo meel diiran *** Sida loo caddeeyo ** (Foornada horay u sii-kululeyso ilaa 170ºF, ka tag albaabka foornada FURAN oo dhig baaquli biyo diirran ah xagga dambe ee foornada. Kadib dhig weelkaaga cajiinka ah ee cajiinka ah dusha albaabka foornada furan. Caddayn ilaa cabir ahaan labalaab.)
Wixii buuxinta strawberry ah
Isku dar strawberries iyo sonkor digsi dhexdhexaad ah oo isku kari ilaa
Ku burburi miraha qaaddo ama isku dar ah isku dar ah sida isku darku u kariyo 5-10 daqiiqo kuleylka dhexdhexaadka ah.
Isku dar ClearJel liin dhanaanta, xaska, iyo biyo si aad u sameysid dharbaaxo aadna ugu darto mirahaaga miraha dabka isku shuuraya. Isku qas ilaa inta la dhuminayo ka dibna ha qaboojiyo.
Si loo sameeyo duub
Xariiq xaashi ah 13'x18 'xaashi leh xaashi xaashi (ama digsi xajmi ahaan la mid ah)
Marka cajiinkaagu caddeeyo, duub cajiinka 10 'ballaaran, 1/4' qaro weyn. Muddo kuma xirna. Ku fidi buuxinta strawberry dusha dusha si siman, illaa geesaha, marka laga reebo hal gees ha ku hayn adiga oo aan buuxin si aad u shaabadaysan karto.
Ku saydhaa miraha strawberries-ka ee la jarjaray buuxinta
Is duub cajiinka dherer-caqli badan. Hubso in duubka ugu horreeya uu aad u adag yahay si aad uhesho qallooc wanaagsan, ka dibna sii wad inaad riixdo cajiinka illaa aad ka gaarto cirifka. Ku caday xoogaa biyo ah ama ukunta ku maydho geesaha qaawan si ay u daboosho cirifka jilicsan ee cajiinka.
Uxee duub 8-10 xaleef isku mid ah iskuna hagaaji xaashidaada daboolan
Si dabacsan ugu dabool tuwaal shaaha una oggolow caddayn inuu laba-jibbaarmo (illaa 90 daqiiqo) ka dibna dub (ama si adag ugu dabool duub caag ah oo geli qaboojiyaha haddii aad rabto inaad iyaga dubto maalinta ku xigta. Aynu u nimaadno heerkulka qolka iyo caddeyn inuu labanlaabmayo ka hor dubista Tani waxay qaadan kartaa 1.5-2 saacadood iyadoo kuxiran sida jikadaadu u kulushahay)
Ku karis 350ºF illaa 25-30 daqiiqo ama illaa bunni dahab ah oo ku xidhan cabbirka duubabkaaga. (Heerkulka gudaha wuxuu gaarayaa 200ºF)
Wixii qaboojiyaha farmaajada
Ku kareem jiiska kareemka gacmo-qabsi ilaa uu ka siman yahay Kadib ku dar subagga jilicsan iyo kareemka illaa inta ay ka siman yihiin.
Ku dar sonkorta budada ah, cusbo, vanilj iyo kareem ilaa inta ay ka hagaageyso iyo joogteynta la rabo. Ku maydh duub diirimaad ah. Ku dar kareemo badan dhaxan qafiif ah.
U adeegida:1duub|Kalori:655kcal(33%)|Kaarboohaydraytyada:83g(28%)|Protein:9g(18%)|Dufan:33g(51%)|Dufan Dufan:labaatang(100%)|Kalastarol:140mg(47%)|Sodium:470mg(labaatan%)|Kaliumperyamper:203mg(6%)|Fiber:3g(12%)|Sonkor:43g(48%)|Vitamin A:1109IU(22%)|Vitamin C:3. 4mg(41%)|Kaalshiyam:66mg(7%)|Bir:3mg(17%)
sida loo sameeyo dhadhanka keega sanduuqa sida keega arooska
karinta keega miiska laga soo duubay keegga
sida loo sameeyo buskudka sonkorta Walmart